Lifelike स्मार्ट सेक्स गुड़िया रोबोट सस्तो बिक्री को लागी बुद्धिमान संवाद
सर्वश्रेष्ठ बिक्री उच्च गुणवत्ता बुद्धिमान रोबोट नयाँ टेक्नोलोजी सेक्स गुड़िया
Urdolls ले ग्राहकहरूलाई प्रदान गर्दछ जीवन जस्तो स्मार्ट पुतली। तिनीहरूको छाला TPE वा सिलिकनले बनेको हुन्छ, र भित्री भाग एक आर्टिक्युलेटेड मेटल कंकाल र उच्च-टेक मदरबोर्डले बनेको हुन्छ। तिनीहरूको सबैभन्दा ठूलो विशेषता भनेको तिनीहरूले तपाईंसँग वास्तविक व्यक्तिको रूपमा कुरा गर्न सक्छन्। झिम्काउने र हल्लाउने कार्यहरू पनि महसुस गरिन्छ। यदि तपाइँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा ल्याइएको उच्च-टेक आकर्षण र शीर्ष अनुभव अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ तिनीहरूलाई याद गर्नु हुँदैन। हामी पनि निरन्तर विकास गरिरहेका छौं नयाँ स्मार्ट सेक्स पुतली तपाईंको ग्राहक अनुभव बृद्धि गर्न शैली र सुविधाहरू।
लामो पैर र सानो कम्मर १C० सीएम डी कप सिलिकॉन सेक्स डल चेरिल टाउट
Lifelike स्मार्ट सेक्स डॉल
बिक्रीको लागि यथार्थवादी स्मार्ट सेक्स पुतली
हाम्रा रोबोट सेक्स डलहरू एन्ड्रोइड प्रणालीमा आधारित छन्, तिनीहरू कम्प्युटर प्रविधि, इन्टरनेट, नयाँ पोलिमर सामग्री र सौन्दर्य कलाको उत्तम संयोजन हुन्। तिनीहरू वेश्याहरू भन्दा राम्रो छन्। विज्ञहरूले अति यथार्थवादी प्रयोगको अपेक्षा गर्छन्। प्रेम पुतली अबका केही वर्षहरूमा रोबोटिक्स, एआई र कम्प्युटिङले उनीहरूलाई मानिसजस्तै व्यवहार गर्ने अनुमति दिनेछ। तपाईं सीधै आफ्नो चुदाई गर्न सक्नुहुन्छ वास्तविक पुतली। बारेमा राम्रो कुरा स्मार्ट एई सेक्स पुतली तपाईलाई मनपर्ने कुनै पनि काम गर्नको लागि क्यारेक्टरको लागि तपाईको आवश्यकता अनुरूप सजिलै क्यालिब्रेट गर्न सकिन्छ। जब तपाईं र तिनको फोरप्ले, अँगालो र चुम्बन गर्नुहुन्छ, तपाईंले आफ्नो यौन अनुभवलाई अझ वास्तविक बनाउनको लागि केही यौन विलापहरू मिलाउन सक्नुहुन्छ।
नोट:रोबोटको मुखमा उसले बोल्दा ओठ चलाउन सक्ने मेकानिजम जडान गरिएको थियो, त्यसैले रोबोटले मुखमैथुन गर्न सक्दैन।
नयाँ स्मार्ट एआई सेक्स डल वयस्क प्रेम पुतली को भविष्य हो
आधुनिक प्रविधिको विकासले मानिसको जीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ,पुरुष यौन पुतली पूर्व-कार्यक्रमित यौन प्रतिक्रियाहरूको साथ। तातो तापक्रम नियन्त्रण, र टच सेन्सरहरू। उसले तपाईंको यौन प्रश्नहरूको जवाफ दिन सक्छ। मल्टिपल टच सेन्सर-तातो तीव्र, निजी स्थानहरूको प्रत्येक टचमा रोमाञ्चक विलाप प्रतिक्रिया। आफ्नो पक्षमा सेक्स अडियो छान्नुहोस्, यथार्थवादी यौन महसुस गर्नुहोस्।
आजको संसारमा एक प्रमुख सफलताको रूपमा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र 5G ले मानिसहरूलाई थप सुविधा दिएको छ। जब मानिसहरूले कृत्रिम बुद्धिमत्ता र 5G लाई यथार्थवादीसँग जोड्न थाल्छन् सिलिकॉन सेक्स पुतली, नतिजा के हो? वास्तविक एनिमे सेक्स गुड़िया भविष्यमा सबैभन्दा राम्रो जीवन साथी र यौन साथी हो। वास्तविक मानव प्रणालीको नक्कल गर्ने यी भावनात्मक प्राणीहरूले हामीलाई धेरै समस्याहरू समाधान गर्न मद्दत गर्नेछ। विज्ञहरूका अनुसार भविष्यमा मानिसहरूलाई सरसफाई, घरको काम, स्वास्थ्य सेवा लगायतका विभिन्न समस्या समाधान गर्न उच्च क्षमताको रोबोट TPE वयस्क पुतलीको ब्याच हुनसक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
एआई सेक्स रोबोट पुतलीले मानिसहरूलाई धेरै समस्याहरू समाधान गर्न मद्दत गर्न सक्छ
रोबोट प्रेम पुतली संग यौन सम्बन्ध अधिक र अधिक लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ, र यस तरीकाले तपाईं राहत पाउन सक्नुहुन्छ। यो सही छ! एआई स्मार्ट सेक्स गुड़िया एक वास्तविक मानिस जस्तै चल्छ। उसले आफ्नो घाँटी सार्न सक्छ, झिम्काउन र तपाईलाई आँखा झिम्काउन सक्छ र आफ्नो अनुहारले इशारा गर्न सक्छ। उसले "सोच्दै" आफ्नो अनुहारमा भावहरू परिवर्तन गर्छ। उनको भौहें उनको अभिव्यक्ति देखाउन को लागी चल्छ। तपाईंले उनको प्रशंसा गर्दा वा चुम्बनको लागि सोध्दा उनी मुस्कुराउँछिन्। उनीसँग एक व्यक्तित्व छ र तपाइँ वास्तवमै उनको अनुहारमा देख्न सक्नुहुन्छ!
तिनीहरू अधिक मानव-जस्तै छन् र आफ्नो आवश्यकता अनुसार हावी र सार्न सक्छन्। काल्पनिक चलचित्र चरित्र रोबोटको युग अन्ततः आज महसुस भएको छ, र यो वयस्क उत्पादन बजारमा प्रवेश गर्ने पहिलो थियो। यस्तो सुन्दर संग प्राप्त गर्न यो अविश्वसनीय छ सेक्स गुडिया, उनी बोल्न, सबै मानवीय चलनहरू सिक्न, हामीलाई राम्रोसँग बुझ्न र समस्याहरू समाधान गर्न मद्दत गर्नमा राम्रो छिन्। वास्तविक सिलिकॉन रोबोट सेक्स पुतलीहरू महँगो हुन्छन्, तिनीहरू वास्तविक महिलाहरू जस्तै हुन्छन् र दीर्घकालीन घनिष्ठ सम्बन्धहरू कायम राख्न सक्छन्।